Shakhsiyaadka & Macluumaadka: Douglas Spotted Eagle | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE. Wararka Injineerka Warbaahinta
Bogga ugu weyn » Featured » Shakhsiyaadka & Macluumaadka: Douglas Spotted Eagle
Shakhsiyaadka & Macluumaadka: Douglas Spotted Eagle
Baahinta Beat ee “NAB Show New York Profiles ”waa wareysiyo taxane ah oo lala yeelanayo xirfadlayaal caan ah oo ka tirsan warshadaha wax soo saarka kuwaasoo sanadkan ka qeyb galaya NAB Show New York (Oktoobar 16-17, 2019).
Maaddaama uu yahay Maareeyaha Barnaamijyada Waxbarshada ee kooxda 'Sundance Media Group', Douglas Spotted Eagle waa macalinka koowaad ee UAS iyo lataliyaha warshadaha ee kooxda Sundance Media Group iyo VASST. Sidoo kale isagu waa muusikiiste caan ah, oo ah khudbad / macallin adduunka ku soo safray, wuxuuna caan ku yahay warshadaha fiidiyowga iyo maqalka, isagoo ku guuleystay Abaalmarinta Grammy ee 2000. Intaa waxaa u dheer, Douglas waa qoraa buugaag dhowr ah iyo DVD-yada, wuxuuna sii wadaa inuu u noqdo lataliye iyo hage loogu talagalay sawir-qaadayaasha, soosaaraha softiweer, iyo idaacadaha. Wuxuu hadda xooga saarayaa tamartiisa iyo khibradiisa gudaha UAV / sUAS (Gawaarida Diyaaradaha Aan Duuliyaha Laheyn / Nidaamka Yaryar ee Aananatka Awood). Douglas wuxuu ahaa iskaashi aasaasaha kooxda Sundance Media Group ee 1996.
Skydiving ilaa 2006 iyo barida UAS ilaa 2012, Douglas waa sawir qaade anteeno ah oo dhameystiray adduunka adrenaline-ka-buuxinta ee muuqaal-xawaare deg deg ah. Waxaa loo magacaabay La Taliyaha La-Taliyaha Amniga iyo Tababarka ee duulista hawada, waa khabiir maareyn ama yareyn halista ah. Douglas waa muuqaal maqal iyo muuqaal ah oo leh abaalmarino badan oo soosaarkiisa; oo leh aqoon ku xeel dheer FAA FARs iyo FSIMs, aragtida Douglas waa in lagu daro sanooyinkiisa sawirka iyo khibradda duulista hab dhaqanka ugu wanaagsan ee wax kasta oo loo yaqaan 'drone / UAV / UAS'. Douglas waa af-hayeen joogto ah iyo wada-tashiyo ku saabsan shaneemo sawirrada UAV, hirgelinta amniga dadweynaha ee UAS, barnaamijyada ganacsiga iyo kaabayaasha UAV, maaraynta khatarta UAV, duulimaad habeenkii UAS, nidaamyada amniga hawada, iyo tababarka 107 si loo hubiyo in duuliyayaashu si cad u fahmaan sharciyada FAA.
Waxaan fursad u helay inaan wareysto Douglas wax yar uun ka hor intuusan bilaabin socdaal wax soo saar oo magaalooyin badan uga socda bariga iyo xeebta galbeed. Waxaan ku bilaabay weydiinta markii ugu horaysay ee uu xiiseeyo muusigga iyo cidda ay saamaynta ku lahayd. “Ma xasuusan karo waqti aan muusiggu qayb muhiim ah ka ahayn noloshayda,” ayuu yidhi. Waxaan awoodey inaan qaato 3 ama 4 casharro gitaarka ah meel qiyaastii 1970-kii, laakiin runti waligood maahan. Markii aan 12 jirsaday, waxaan soo helay biibiilahii Dhaladka Maraykanka, waxaanan dhistay biibiilehaygii ugu horreeyay da'daas. Aniga waxaa si qoto dheer ii saameeyay fanaaniinta sida Jean Luc-Ponty, Tomita, Dan Fogelberg, iyo Gentle Giant. ”
Duubista dhowr albums ka sokow, Douglas xirfadiisa miyuusigga sidoo kale waxay udhalatay filim iyo TV. "Muusigeyga, anigoo xoogaa caan ku ah goob laga dhawaajiyay oo ah biibiile / jazz la isu geeyay, ayaa horseeday 'cirbadaha muusiga ah' [muusig horay loo sii daayay oo loo isticmaalay gooldhalinta asalka ah] in loo adeegsado telefishanno badan iyo mashaariic filim," ayuu yiri. “Goolkeygii ugu horreeyay ee gooldhalinta ma uusan dhicin illaa albumkeygii saddexaad ama afaraad, waxaana ku faraxsanahay inaan la shaqeeyo Brian Keane, oo ah soo saare ku guuleystay Emmy badan. Wuxuu i baray xanuunka isku duba ridka jidadka si ka duwan sidii aan markii hore sameyn jiray, wuxuuna i baray dulqaadashada faahfaahin kooban. Waxaa laga yaabaa in waayo-aragnimadii ugu xusuusta badneyd ay ahayd inaan ka dhaliyo dukumiinti dokumenti ah oo ku saabsan dadka Saamiga ah ee waddamada Scandinavia, halkaas oo aan ugu safray meeshoodii oo aan waqti badan ku qaatay. Mid ka mid ah raadadka ayaa lagu duubay istuudiyaha ABBA ee Benny Andersson oo ku yaal Stockholm. ”
Douglas wuxuu qoray buugaag dhowr ah oo kahadlaya maadooyin kaladuwan. Waxaan weydiiyay sida uu ku bilaabay shaqadiisa qorista. "Wanaaggayga.. Buugaagta," ayuu ku jawaabay. “Weligay waan jeclaa akhriska. Markii aan yaraa, koronto kuma haysan xerada xoolaha, sidaas darteed buugaagta ayaa ahaa warbaahinta kaliya ee la heli karo. Ilaa dhowaan, gurigeygu wuxuu ka buuxay buugaag walba oo nuuxsan. Waxaan ku qoray buugaag kamaradaha, teknolojiyada waxsoosaarka baahinta, nidaamyada tafatirka CMX, nidaamyada NLE, laydhka, DV iyo koodhadhka HDV, cilmi nafsiga LDS / Ismiidaaminta, Drones, Surround Sound, Farsamooyinka makarafoonka, Parachuting books 34 buugaag wadar ahaan. Marka laga reebo hal mowduuc oo ku saabsan qabashada iyo dhoofinta sawirro waa weyn iyo / ama maqal weyn. ”
Douglas wuxuu sidoo kale i siiyay xoogaa aragti ah oo ku saabsan shaqadiisa uu la leeyahay Sundance Media Group. “Waxaan aasaasay Sundance Media Group 1994 si aan ugu tababaro soo saarayaasha iyo muusikiisteyaasha inay u adeegsadaan teknolojiyadda duubista dijitaalka ah ee cusub, sida Turtle Beach iyo Digidesign. Waxaan qaatay lamaane dhawr sano kadib, iyo 2012, rafiiqaygu wuxuu ka iibiyey qaybtiisa ninka hada haysta aqlabiyada shirkadda, Jennifer Pidgen. Waxaa loogu magac daray 'SMG,' kooxdan ayaa hada bixisa ku dhowaad 100 fasalo oo ku saabsan mowduucyo kala duwan oo ka imanaya Audio Production ilaa sawir biyo / ROV. "
Sidii aan horey u soo sheegnay, Douglas waa sawir qaade sare oo xagga hawada ah, sidaa darteed waxaan weydiiyay sida uu ugu lug yeeshay howshaas. Shaqadaydii sawir qaadista / fiidiyowga ahayd ee 'sUAS' waxay ka kortay shaqadaydii filim-sameeye hawadeed. Haddii aan ku duulayo Skymaster 210, freefalling, ama hoosta hoostiisa, sawir qaadista hawada ayaa i xiiseysa. Sannadkii 2010, waxaan soo helay qalabkan cusub ee hadda loo yaqaan 'drone, RPAS, sUAS,' waxaana bilaabay tijaabinta iyo barashada. Muddo aan dheereyn kadib, waxaan is arkay aniga oo baraya qaybaha 'sUAS' weriyeyaasha. Sannadkii 2016, wax yar uun ka hor xeerarka cusub ee federaalka, waxaan u abuurnay heerarka tababarka ee sUAS ee wariyeyaasha, waxaanan ku soo bandhignay 2016-ka NAB Show. "
Wax ku biirinta Douglas ee NAB Show New York Oktoobar waxay noqon doontaa aqoon isweydaarsi loogu magac daray "Hillaaca Hal-abuurka ah ee Miisaaniyadda," kaas oo loo soo bandhigi doono iyada oo qayb ka ah Shirka Post / Production. Markii iigu horeysay NAB Show wuxuu ku jiray 1985 isagoo ka qayb galayaal ah. Sannadkeygii ugu horreeyay ee aan soo jeediyaha ahaan jiray wuxuu ahaa 1997, oo waxaan soo bandhigi jiray sanad kasta tan iyo wakhtigaas. Shaki kuma jiro in xiriirkeyga aan la leeyahay NAB Show ayaa wanaajiyay oo kartiday shaqadayda. Waxaa la ii baray James Cameron, Dean Devlin, Jodi Eldred, Sony, Panasonic, RedRock Micro, FoxFury, boqolaal macaamiil oo warbaahin ah oo ka dhashay natiijada NAB Show. Waa mid ka mid ah hay'adaha aadka loogu qiimeeyo xirfadeyda, xitaa 40 sano kadib.
“'Iftiinka Hal-abuurka ee Miisaaniyadda' wuxuu tusi doonaa ka-qaybgalayaasha sida aan si wax-ku-ool ah ugu buuxinnay gaari xamuul ah hal boorso oo geli kara weelka dusha sare. Waxaan u qaatay nidaamkan - iyo nidaamyo la mid ah - ilaa Mt. Everest, boos celin badan, iyo meelo kale oo aan koronto laga helin, ama aan lagu noolaan karin tiro ahaan. Waxaan soo bandhigi doonaa sida iftiiminta yar-yar ee wax-ku-oolka ah ay u tahay mid la awoodi karo — hadana aan wax tanaasul ah lahayn - oo loola jeedo iftiinka yar yar, wareysi, dhacdooyin shirkadeed, iwm. Dhageystayaasha la bartilmaameedsanayaa waa qof kasta oo ku lug leh 'ugaarsade' - soo saare tifaftire — doorarka , run n 'hubka dokumentariga ah, wareysiyada shirkadaha, madaxda hadalka, ama dadka isticmaala fiidiyowga aagagga yar ama nidaamyada nalalka wax soo saarka sawirada. ”
2016 NAB Show 2016 NAB Show Job Fair 2016 NAB Show News 2019 NAB Show Broadcast Awards Beat Broadcast Beat Magazine Broadcast Engineer Broadcast Engineering Idaacadan Convention Broadcasting Convention Douglas Spotted Eagle NAB NAB 2015 NAB 2016 NAB Show NAB16 nabshow sUAS Kooxda Sundance Media Group UAV 2019-10-10
Previous: Xalka Fidinta Si Loogu Soo Galo Suuqa Gawaarida OB Gaari Adeeg Adeeg Ah
Next: Nidaamyada Kala Duwan ee Teknolojiyadda Mareykanka waxay ka helaan Maalgashi Istaraatiijiyadeed shirkadda FOR-A Company Limited